Abaalmarinta PortalProgramas (deeq dhan 1400 euro) | Laga soo bilaabo Linux
Abaalmarinta PortalProgramas (deeq dhan 1400 euro)
Abaalmarinta PortalProgramas ee Barnaamijka Bilaashka ah ee 2011 ayaa bilaabmaya. Sannadkan warka waxaa ku jira 1400 euro oo tabarucaad ah iyo 5 qaybood oo cusub.
Laakiin… Maxay ku saabsan yihiin abaalmarinnadan?
Fudud, waxay ku abaal mariyaan barnaamijyada / softwares-ka saamaynta badan ku yeeshay horumarka tikniyoolajiyadda.
Waxaan uga tagayaa qoraalka maqaalka rasmiga ah:
Dhamaanteen waan ognahay barnaamijyada ugu caansan ee bilaashka ah sida Ates, eMule, OpenOffice.org ... laakiin waxaa ka dambeeya inbadan oo ka mid ah horumarka tikniyoolajiyadda hadda jira software bilaash ah, softiweer-ka oo inta badan aan la dareemin oo aan aqoonsi weyn haysan, laakiin haddana ay muhiim u tahay tikniyoolajiyadda.
Sidaa darteed, Abaalmarinta Barnaamijyada Portal Sannadkan waxaan soo bandhignay 5 qaybood oo cusub:
Waxyaabaha muhiimka u ah tikniyoolajiyadda: Nidaamyada kumbuyuutarku waxay hagaajiyaan mahadnaq xaqiiqda ah inay jirto saldhig bilaash ah oo bilaash ah oo software ah oo lagu horumariyo (qaabdhismeedka, tijaabinta, keydka macluumaadka ...). Waxaan abaalmarinaynaa softiweer bilaash ah oo ka caawiyay horumarka inta ugu badan
farsamo inta lagu gudajiray sanadkan.
Waxyaabaha muhiimka u ah Webka: Bogagga shabakaddu way is beddeleen oo waxay noqdeen kuwo dhaqso badan, firfircoon oo la jaan qaada dhammaan daalacayaasha. Waxaan abaalmarinaynaa softiweerka bilaashka ah ee ka caawiyay inta badan hagaajinta tikniyoolajiyadda bogagga sanadkan.
Muhiim u ah isgaarsiinta: Faafinta wararka iyo isgaarsiinta waa tiir aasaasi ah oo ku jira internetka oo gacan ka gaystay kacaan ka dhaca bulshada. Kuwanna way ka dhakhso badan yihiin mahadnaqa barnaamijyada bilaashka ah ee fududeeya maareynta baloogyada, joornaalada, goleyaasha ... iyo xiriirka ka dhexeeya bilaashka ee ka caawiyay inta badan hagaajinta isgaarsiinta internetka sannadkan.
Waxyaabaha muhiimka u ah shabakadaha isgaarsiinta: Waxaan abaal marinaa softiweerka bilaashka ah inta ugu badan ee ay ka caawisay hagaajinta waxqabadka shabakadaha isgaarsiinta.
Ganacsiga daruuriga ah: Waxaan ku abaal marinaa barnaamijka bilaashka ah ee
Waxay ka caawisay kobaca ganacsiga.
Barnaamijka ugu caansan ee bilaashka ah: Software-ka bilaashka ah ayaa dareemi kara isticmaaleyaal badan haddii aysan ahayn barnaamijyada sida ballaaran loo isticmaalo ee ka caawiyay in loo ogeysiiyo dadweynaha guud. Waxaan abaalmarinaynaa qofka sida weyn uga caawiyay inuu soo bandhigo softiweerka bilaashka ah sanadkan.
Inta badan barnaamijyada bilaashka ah ee kacaanka: Waxaan iftiimineynaa mashruuca sanadkaan aadka u kordhay ee waxbadan ka caawinaya hagaajinta tikniyoolajiyadda.
Awoodda koritaanka weyn: Waxaan muujineynaa software bilaash ah taas
waxaad leedahay rajo badan oo aad ku kici karto haddii aad hesho tabaruc. Waxaa jira mashaariic badan oo fikrado wanaagsan leh laakiin hadana ma haystaan ​​kaabayaal ku filan oo ay ku fuliyaan: server xoog badan, CPUs ... Abaalmarintaan waxay u socotaa barnaamijka kori kara inta ugu badan mahadnaqa deeqda.
1 1.400 euro deeqo:
1.400 euro deeqo:
Laga soo bilaabo Barnaamijyada Portal waxaan rabnaa inaan faafino softiweer bilaash ah inta aan iska kaashaneyno horumarintiisa. Taasi waa sababta aan u fulino tabarucaad lacageed kuwaas oo ka caawiya horumarinta mashaariic badan. Sannadkii ugu horreeyay waxaan qaybinnay 500 oo euro, daabacaaddii labaad ee Abaalmarinta waxay ahayd 1.000, markanna waxay noqon doontaa 1.400 euro oo ah tabarucaad. Waxaa jira sababo badan oo ah softiweer bilaash ah
waxay u baahan tahay tabarucaad, qaar ka mid ah ayaan horeyba u soo koobnay markaan ka hadlayno Sidee software-ka bilaashka ahi lacag u abuuraa.
Nofeembar 23 - " Magacaabis ayaa bilaabmaysa
Diseembar 1st - » Dhammaadka Magacaabidda iyo Bilowga Codbixinta.
Diseembar 20 - " Dhammaadka Codbixinta
Janaayo 24 - » Ku guuleystayaasha waa la daabici doonaa.
Wixii aad horeyba u ogayd ... inaad uga qayb gasho isla maanta waxaad bilaabi kartaa codbixinta 😀
Salaan kadib waana mahadsan nahay Sawirka meeleynta Carmen Manzanares (Isgaarsiinta iyo suuqgeynta) inaad nala soo xiriirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Abaalmarinta PortalProgramas (deeq dhan 1400 euro)
Sidee fiicnaan laheyd kuwa 1400 euro aniga ahaan, aniga iyo wixii aan keydsaday waxay ku dhowdahay Music Man Bongo
Abaalmarinta Geesinimada SISI ee ah hahaha aan faa'iido lahayn
Haye! ha dhaawicin dareenka yar Qashinka wali wuu haray, waxaan dhihi Geesi.
Nah, ma jiro qof halkan ka socda waligiis kuma garaacayo meesha uu iigu xanuun badan yahay
Nin meeshaas jooga anigu ma ahi HAHA wax aan waxtar lahayn
Hadda Desdelinux wuxuu ku tusayaa Wakiilka Isticmaalaha, laakiin qaab kale